यौन हिंसाको मूल्य संसद् स्थगनसम्म | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २९ पुष २०७६, मंगलवार ०७:१२ लेखक nepali janta
काठमाडाैं । एकै क्षणको सन्कीपनबाट शुरु हुने यौन हिंसाको लगात विश्वले कति भौग्दै छ ? अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्–‘यौन सिंसाको आर्थिक भारत धेरै मुलुकको वार्षिक बजेटभन्दा अधिक हुन्छ । यसको मानसिक र सामाजिक लागतको त कुनै हिसाब नै छैन ।’
परिणामतः पटक–पटक संसद स्थगित भएको कारण लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको भनिएको सरकार र सत्ताधारी दलपनि बद्नाम भएका छन्–यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लागतमा औन हिंसाको हात देखिन्छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीस नयनबहादुर खत्रीको निधन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीस नयनबहादुर खत्रीको १०० बर्षको उमेरमा निधन भएको छ ।
खत्रीको उपचारको क्रममा शुक्रबार मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको…
डलर भाउ आकाशियो
काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । डलरको भाउ आकाशिँदा नेपाली रुपैयाँ निकै सस्तो बनेको छ…
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुँदै , अनौपचारिक रूपमा काम थालनी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाटै अनौपचारिक रुपमा आफ्नो काम थालनी गरेका छन् ।
शिक्षण अस्पतालमा उपचारार्थ प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य…
तस्करीमा भन्सार एजेन्टको संलग्नता, सामानको तस्करी बढ्दै !
विराटनगर । विराटनगर भन्सार कार्यालय रानीदेखि पाँच किलोमिटर दक्षिण भारतीय भूमिमा रहेको…
अछाममा ‘विप्लव आतंक’, १२ वडा कार्यालयमा तालाबन्दी
अछाम । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अछाममा पनि तालाबन्दी गरेको छ । असार २२ गते बन्दको…
ठुलो कण्डम, बढी मज्जा
एजेन्सी । यौनक्रियाका क्रममा अधिकांश युवा कण्डम प्रयोग गर्न मान्दैनन् । कण्डमको प्रयोग नगर्नु कयौ रोगलाई निम्ता दिनु हो…
प्रहरीकाे फरार सूचीमा गायिका आस्था, अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्न अनुमति 12 views